Hadisoam-pizaran'arika - Wikipedia
Hadisoam-pizaran'arika (anglisy: segmentation fault) dia fijanonan-drindrankajy fampiharana izay nanandrana namaky na nanoratra tamy faritr'arika tsy mbola natokana ho azy.
Rehefa mandeha ambony milina ny rindrankajy fampihana dia mila arika izay atokan'ny mpandrindra milina ho azy ireo. Rehefa natokana tokoa ny ampahan'arika dia tsy misy fampiharana hafa afaka mamaky na manoratra eo amin'ilay faritr'arika. Izany dia natao hiarovana ireo fampiharana amin'ny hadisoan'ny rindrankajy fampiharana hafa. Ka rehefa manandrana manakatra faritr'arika tsy natokana ho azy ny rindrankajy fampiharana iray dia hitan'ny mpandrindra milina izany sady ajanony ilay rindrankajy nana hadisoana.
Rehefa mandeha ny fampiharana dia atokan'ny mpandrindra milina ho azy ny ampahan'arika. Anefa kosa, noho ny filàny manokana dia mety mila arika be kokoa izy. Mangataka arika be kokoa amin'ny mpandrindra milina ilay fampiharana. Anjaran'ny rindrankajy fampiharana ny mampiasa ilay faritr'arika ary tsy manoratra any ivelan'ny faritr'arika natokana ho azy.
Ny olana dia ny mahafantatra ny toerana isiana rehefa mampiasa ilay arika. Ka eo no mety ihoarana raha tsy mitandrina, ka raha mivoaka ny toerana natokana dia mijanona avy hatrany ny fandehanan'ny rindrankajy fampiharana. Eo ilay antsoina hoe fihoaran-dahinkirika (buffer overflow)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadisoam-pizaran%27arika&oldid=770012"
Voaova farany tamin'ny 5 Aogositra 2015 amin'ny 13:11 ity pejy ity.